MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS » President of Myanmar has appointed U Sein Oo as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to Malaysia
President of Myanmar has appointed U Sein Oo as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to Malaysia
by adminmofa on 15/02/2017 at 5:01 PM
The President of the Republic of the Union of Myanmar has appointed U Sein Oo, Director-General of the Consular and Legal Affairs Department, Ministry of Foreign Affairs, as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Union of Myanmar to Malaysia.
Dated. 15 February 2017
ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ကောင်စစ်ရေးရာနှင့် ဥပဒေရေးရာဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးစိန်ဦးအား မလေးရှားနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးအာဏာကုန် လွှဲအပ်ခြင်းခံရသော ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် သံအမတ်ကြီးအဖြစ် ခန့်အပ်လိုက်ပြီးဖြစ်သည်။
ရက်စွဲ၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်